Myanmar Leading Property Website, Property for sale/rent, Myanmar Real Estate | ShweProperty
var url = "https://www.shweproperty.com/phonenumber/agent";
clicked : '1',
agent_id : agentid,
sp_detail : spdetail,
sp_type : 2
// $('.phonenonPlace'+spid).html('Phone : '+data+'');
spid = $(this).attr('propertyid');
var url = "https://www.shweproperty.com/phonenumber/call_now";
မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ရောင်းရန် / ငှားရန် ရှိသော အိမ်ခြံမြေများ ရောင်းရန် - အေးရိပ်မွန်လုံးချင်းအိမ်ရာဝင်းအတွင်းရှိ ကွန်ဒိုသစ် အဆင့်မြင့်စကားဝါမြိုင်ကွန်ဒို ရောင်းရန်ရှိသည်
အသင့်နေ,ပါကေးခင်း,Master Bedroom,Underground Tank,Overhead Tank,Own…...
Advertised by Soe San…
အေးရိပ်မွန်လုံးချင်းအိမ်ရာဝင်းအတွင်းရှိ ကွန်ဒိုသစ် အဆင့်မြင့်စကားဝါမြိုင်ကွန်ဒို ရောင်းရန်ရှိသည်
လှိုင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	2,050 သိန်း
Phone : 01-510600, 01-510940, 09-5040160,
ရောင်းရန် - အေးရိပ်မွန်လုံးချင်းအိမ်ရာဝင်းအတွင်းရှိ အသင့်နေ အဆင့်မြင့်ကွန်ဒိုသစ် စကားဝါမြိုင်ကွန်ဒို ရောင်းမည်
အေးရိပ်မွန်လုံးချင်းအိမ်ရာဝင်းအတွင်းရှိ အသင့်နေ အဆင့်မြင့်ကွန်ဒိုသစ် စကားဝါမြိုင်ကွန်ဒို ရောင်းမည်
ရောင်းရန် - အေးရိပ်မွန်လုံးချင်းအိမ်ရာဝင်းအတွင်းရှိ အသင့်နေထိုင်နိုင်သော အဆင့်မြင့်ကွန်ဒိုသစ် စကားဝါမြိုင်ကွန်ဒို ရောင်းမည်
ဧရိယာ : 1460 sqft
အေးရိပ်မွန်လုံးချင်းအိမ်ရာဝင်းအတွင်းရှိ အသင့်နေထိုင်နိုင်သော အဆင့်မြင့်ကွန်ဒိုသစ် စကားဝါမြိုင်ကွန်ဒို ရောင်းမည်
လှိုင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	2,200 သိန်း
ရောင်းရန် - အေးရိပ်မွန်အိမ်ရာရှိ ဝယ်ယူပြီးသည်နှင့်အသင့်နေထိုင်နိုင်သော အဆင့်မြင့်ကွန်ဒိုသစ် စကားဝါမြိုင်ကွန်ဒို ရောင်းမည်
အေးရိပ်မွန်အိမ်ရာရှိ ဝယ်ယူပြီးသည်နှင့်အသင့်နေထိုင်နိုင်သော အဆင့်မြင့်ကွန်ဒိုသစ် စကားဝါမြိုင်ကွန်ဒို ရောင်းမည်
ငှားရန် - ပြည်လမ်း အေ၀မ်းလမ်းသွယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် ငှားရန်ရှိသည်။
Advertised by Perfect…
ဧရိယာ : 3000 sqft
ပြည်လမ်း အေ၀မ်းလမ်းသွယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် ငှားရန်ရှိသည်။
မရမ်းကုန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	16 သိန်း
Advertiser : Perfect World Real Estate
Phone : 09-440 9988 40, 09-440 9988 50
ငှားရန် - ကမ္ဘောဇလမ်းတွင် လုံးချင်းအိမ် ငှားရန်ရှိသည်။
ဧရိယာ : 2520 sqft
ကမ္ဘောဇလမ်းတွင် လုံးချင်းအိမ် ငှားရန်ရှိသည်။
ဗဟန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	3,500 USD
ငှားရန် - စမ်းချောင်းမြေနီကုန်းတွင် လူနေရုံးခန်းဖွင့်ရန် လုံးချင်းအိမ် ငှားရန်ရှိသည်။
စမ်းချောင်းမြေနီကုန်းတွင် လူနေရုံးခန်းဖွင့်ရန် လုံးချင်းအိမ် ငှားရန်ရှိသည်။
စမ်းချောင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	18 သိန်း
ငှားရန် - A-1491 Royal River View Codo တွင် အခန်းသန့်ငှားရန်ရှိသည်။	ကွန်ဒို
ဧရိယာ : 1832 sqft
A-1491 Royal River View Codo တွင် အခန်းသန့်ငှားရန်ရှိသည်။	ပန်းပဲတန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	2,300 USD
A-1491 Royal River View Codo တွင် အခန်းသန့်ငှားရန်ရှိသည်။	ပန်းပဲတန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ရောင်းရန် - B-1002 မာစတာ(၁)ခန်း၊ ရိုးရိုး(၂)ခန်း ပါဝင်သော Royal ဇောတိကကွန်ဒို ရောင်းရန်ရှိသည်။	ကွန်ဒို
B-1002 မာစတာ(၁)ခန်း၊ ရိုးရိုး(၂)ခန်း ပါဝင်သော Royal ဇောတိကကွန်ဒို ရောင်းရန်ရှိသည်။	သင်္ဃန်းကျွန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	1,500 သိန်း
B-1002 မာစတာ(၁)ခန်း၊ ရိုးရိုး(၂)ခန်း ပါဝင်သော Royal ဇောတိကကွန်ဒို ရောင်းရန်ရှိသည်။	သင်္ဃန်းကျွန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ငှားရန် - M.W.E.A Tower with Fully Furniture
အသင့်နေ,ကြွေခင်း,ပါကေးခင်း,Master Bedroom,Overhead Tank,Own…...
ဧရိယာ : 1850 sqft
M.W.E.A Tower with Fully Furniture
ဒဂုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	3,000 USD
ငှားရန် - ရန်ကုန်မြို့ရှိ အဆင့်မြင့်ကွန်ဒိုတွင်ပါဝင်သော Royal Sin Min Condo Room
အသင့်နေ,ပါကေးခင်း,Master Bedroom,Satellite System,Security Door Lock…...
ရန်ကုန်မြို့ရှိ အဆင့်မြင့်ကွန်ဒိုတွင်ပါဝင်သော Royal Sin Min Condo Room
အလုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	1,800 USD
ငှားရန် - A-1009 Junction Square Shopping အနီးအဆင့်မြင့် ကွန်ဒိုအခန်း ငှားရန်ရှိသည်။
A-1009 Junction Square Shopping အနီးအဆင့်မြင့် ကွန်ဒိုအခန်း ငှားရန်ရှိသည်။
ကမာရွတ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	20 သိန်း
ငှားရန် - အောက်ကြည်ြ့မင်တိုင်လမ်းမအနီး ရုံးခန်းဖွင့်ရန်ကောင်းသော လုံးချင်း၃ထပ်အိမ်
အောက်ကြည်ြ့မင်တိုင်လမ်းမအနီး ရုံးခန်းဖွင့်ရန်ကောင်းသော လုံးချင်း၃ထပ်အိမ်
ကြည့်မြင်တိုင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	20 သိန်း
ငှားရန် - 469 - မြန်မာ့ဂုဏ်ရောင်အိမ်ရာ ရှိ လုံးချင်းအိမ် . . .
အသင့်နေ,RC ခင်း,Master Bedroom...
ဧရိယာ : 6400 sqft
469 - မြန်မာ့ဂုဏ်ရောင်အိမ်ရာ ရှိ လုံးချင်းအိမ် . . .
တာမွေ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	28 သိန်း
Asking Price : 28 သိန်း
ရောင်းရန် - ငွေကြာယံ၊ ပေ ၁၀၀ × ပေ ၆၀ မြေကွက်ရောင်းမည်
Advertised by New Life
ဧရိယာ : 6000 sqft
Listed on 14 January 2017
ငွေကြာယံ၊ ပေ ၁၀၀ × ပေ ၆၀ မြေကွက်ရောင်းမည်
တောင်ဥက္ကလာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	15,000 သိန်း
Asking Price : 15,000 သိန်း
Phone : 09 43089164, 0973168319
ရောင်းရန် - ကုက္ကိုင်းရေကူးကန်အနီး မြေကွက်ရောင်းမည်
ဧရိယာ : 5500 sqft
ဗဟန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	22,000 သိန်း
Asking Price : 22,000 သိန်း
ရောင်းရန် - ၇ မိုင် ကုန်းမြင့်ရိပ်သာတွင် Furniture အပြည့်အစုံပါပြီး အခန်းများဖွဲ့စည်းထားပြီးသားဖြစ်သော လုံးချင်းအိမ် နှစ်ထပ်ခွဲရောင်းရန်ရှိသည်
ကြွေခင်း,ပါကေးခင်း,RC ခင်း,Master Bedroom,Satellite System,Security…...
Advertised by Thein…
Listed on 13 January 2017
၇ မိုင် ကုန်းမြင့်ရိပ်သာတွင် Furniture အပြည့်အစုံပါပြီး အခန်းများဖွဲ့စည်းထားပြီးသားဖြစ်သော လုံးချင်းအိမ် နှစ်ထပ်ခွဲရောင်းရန်ရှိသည်
မရမ်းကုန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	16,500 သိန်း
Advertiser : Thein Myo Htun
Asking Price : 16,500 သိန်း
Phone : - 09 5173560, 09 5199395
ငှားရန် - Sinmalite Business Tower
အသင့်နေ,ကြွေခင်း,Master Bedroom,Overhead Tank,Own Meter,Upper Basement…...
Advertised by ကြယ်စင်လင်း…
Sinmalite Business Tower
ကမာရွတ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	15 သိန်း
Advertiser : ကြယ်စင်လင်း အိမ်ခြံမြေ၀န်ဆောင်မှု
Phone : 09 4310 8920
ရောင်းရန် - မြို့ထဲနှင့်အနီးဆုံး သမ္မတကွန်ဒို ရောင်းမည်
အသင့်နေ,ပါကေးခင်း,Master Bedroom,Overhead Tank,Own Meter,Full Decoration,Carparking,Power…...
မြို့ထဲနှင့်အနီးဆုံး သမ္မတကွန်ဒို ရောင်းမည်
ဒဂုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	2,650 သိန်း
Asking Price : 2,650 သိန်း
ငှားရန် - မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ မင်းဓမ္မကွန်ဒိုငှားမည်
Master Bedroom,Overhead Tank,Own Meter,Own motor,Power and lighting Line,Hall Type,ရေ+မီး...
မရမ်းကုန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	3,200 USD
Advertiser : Aung Soe
Asking Price : 3,200 USD
Phone : 01-209429, 01-209258,
ရောင်းရန် - ဝေဇယန္တာဥယျာဉ်အိမ်ရာရှိ အဆင့်မြင့်လုံးချင်းရောင်းမည်
ပါကေးခင်း,Overhead Tank,Own Meter,Own motor,Power and lighting Line,Hall Type,ရေ+မီး...
Advertised by Shwe…
ဧရိယာ : 9000 sqft
သင်္ဃန်းကျွန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	13,000 သိန်း
Advertiser : Shwe Minn The Mee Realestate
Asking Price : 13,000 သိန်း
Phone : 095041178, 095014467
ငှားရန် - For Rent In Royal Malikha Condo, Parami Road, Mayangone Township
Master Bedroom,Overhead Tank,Own Meter,Carparking,Own motor,Power and lighting Line,Hall Type,ရေ+မီး...
ဧရိယာ : 2700 sqft
For Rent In Royal Malikha Condo, Parami Road, Mayangone Township
မရမ်းကုန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	3,000 USD
ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာ တကောင်း ၈ လမ်း ရှိ ၆လွှာတိုက်ခန်းရောင်းမည်
ကြွေခင်း,Own Meter,Own motor,Power and lighting Line,Hall Type,ရေ+မီး,ဘိုထိုင်...
တောင်ဥက္ကလာ တကောင်း ၈ လမ်း ရှိ ၆လွှာတိုက်ခန်းရောင်းမည်
တောင်ဥက္ကလာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	290 သိန်း
Phone : 09-43081500,09-795300860,09-425022896,09-259256367
ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကာ လာ ဝရုဏာ ၆ လမ်း ရှိ ၂လွှာတိုက်ခန်းရောင်းမည်
Own Meter,Own motor,Power and lighting Line,Hall Type,ရေ+မီး,ဘိုထိုင်...
တောင်ဥက္ကာ လာ ဝရုဏာ ၆ လမ်း ရှိ ၂လွှာတိုက်ခန်းရောင်းမည်
ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာ သုတ ၈လမ်း ရှိ ၃လွှာတိုက်ခန်းရောင်းမည်
တောင်ဥက္ကလာ သုတ ၈လမ်း ရှိ ၃လွှာတိုက်ခန်းရောင်းမည်
တောင်ဥက္ကလာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	380 သိန်း
ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာ မြင်သာ ၁၀လမ်း ရှိ ၃လွှာတိုက်ခန်းရောင်းမည်
ဧရိယာ : 810 sqft
တောင်ဥက္ကလာ မြင်သာ ၁၀လမ်း ရှိ ၃လွှာတိုက်ခန်းရောင်းမည်
ရောင်းရန် - တိုက်​ခန်း
အသင့်နေ,ကြွေခင်း,ဂျိုးဖြုရေ,RC ခင်း,Own Meter,Own…...
Advertised by soe win
Listed on6January 2017
Advertiser : soe win
Phone : 0931125012
ငှားရန် - အခန်း ၂၀၂ တိုက် E ကမ္ဘာအေးဗီလာ တွင်အသင်နေနိုင်သော ကွန်ဒို တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်
Advertised by Nay Nwe
အခန်း ၂၀၂ တိုက် E ကမ္ဘာအေးဗီလာ တွင်အသင်နေနိုင်သော ကွန်ဒို တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်
မရမ်းကုန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	1,600 USD
Advertiser : Nay Nwe
Phone : 09- 5502442
ငှားရန် - ရွှေသံလွင် စက်မှုဇုန်တွင် ဂိုဒေါင်ငှားရန်ရှိသည်
Advertised by Ayeyarwaddy…
ဧရိယာ : 54000 sqft
ရွှေသံလွင် စက်မှုဇုန်တွင် ဂိုဒေါင်ငှားရန်ရှိသည်
လှိုင်သာယာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	195 သိန်း
Advertiser : Ayeyarwaddy Real Estate
Asking Price : 195 သိန်း
Phone : 09 8615699, 09- 5050488, 09- 5052054
ရောင်းရန် - ရွှေလင်ဗန်း စက်မှုဇုန်တွင် မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိသည်
ရွှေလင်ဗန်း စက်မှုဇုန်တွင် မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိသည်
လှိုင်သာယာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	10,400 သိန်း
Asking Price : 10,400 သိန်း
ငှားရန် - ရွှေနှင်းဆီလမ်းတွင် ပရိဘောဂစုံပါသော အဆင့်မြင့်လုံးချင်းအိမ် ငှားရန်ရှိသည်
Master Bedroom,Overhead Tank,Own Meter,Own motor,Power and lighting Line,ရေ+မီး,ဘိုထိုင်...
Advertised by soe kabar
ဧရိယာ : 3500 sqft
Listed on 22 December 2016
ရွှေနှင်းဆီလမ်းတွင် ပရိဘောဂစုံပါသော အဆင့်မြင့်လုံးချင်းအိမ် ငှားရန်ရှိသည်
မရမ်းကုန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	25 သိန်း
Phone : 01-549214, 01-8603731 ,01-8603732,01-8603734,…
ငှားရန် - ဝေဇယန္တာဥယျာဉ်အိမ်ရာတွင် ပရိဘောဂစုံပါသော လုံးချင်းအိမ် ငှားရန်ရှိသည်
ဝေဇယန္တာဥယျာဉ်အိမ်ရာတွင် ပရိဘောဂစုံပါသော လုံးချင်းအိမ် ငှားရန်ရှိသည်
သင်္ဃန်းကျွန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	39 သိန်း
Asking Price : 39 သိန်း
ငှားရန် - ပြည်လမ်းသန့် (၇) မိုင်တွင် အဆင့်မြင့် လုံးချင်းအိမ် ငှားရန်ရှိသည်
ပြည်လမ်းသန့် (၇) မိုင်တွင် အဆင့်မြင့် လုံးချင်းအိမ် ငှားရန်ရှိသည်
ရောင်းရန် - စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ကြံခင်းလမ်း၊ဗဟိုလမ်းအနီးတွင် တိုက်ခန်းရောင်းမည်
Advertised by ရီရီ
Listed on 21 December 2016
စမ်းချောင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	350 သိန်း
Phone : 09796765062
ရောင်းရန် - အိမ်အမှတ် ၇၅၂ (က)၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း (၇)ရပ်ကွက်
အသင့်နေ,ပါကေးခင်း,Basement Car Parking,Full Decoration,Carparking,Power…...
Advertised by Hlaing…
အိမ်အမှတ် ၇၅၂ (က)၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း (၇)ရပ်ကွက်
တောင်ဥက္ကလာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	530 သိန်း
Advertiser : Hlaing Min Htet
Asking Price : 530 သိန်း
Phone : 09-773920289
ရောင်းရန် - ၁၀/တောင်ရပ်ကွက်၊ ရတနာလမ်းမကြီးပေါ်၊ တိုက်အမှတ်(၁)၊အခန်းအမှတ်(၂၀၂) ၊ ဒုတိယထပ်၊အိုးအိမ်ဦးစီးဋ္ဌာနနှင့် တက်လမ်းဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်း ပြီး pile foundation ဖြင့်အရည်အသွေးပြည့် (စံပြ)ဆောက်လုပ်ထားသော ရတနာလမ်းသစ်အိမ်ရာရှိ တိုက်ခန်းသင့်တော်သောဈေးဖြင့်ရောင်းမည်။
Advertised byုဦးအောင်မြင့်ဦး
၁၀/တောင်ရပ်ကွက်၊ ရတနာလမ်းမကြီးပေါ်၊ တိုက်အမှတ်(၁)၊အခန်းအမှတ်(၂၀၂) ၊ ဒုတိယထပ်၊အိုးအိမ်ဦးစီးဋ္ဌာနနှင့် တက်လမ်းဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်း ပြီး pile foundation ဖြင့်အရည်အသွေးပြည့် (စံပြ)ဆောက်လုပ်ထားသော ရတနာလမ်းသစ်အိမ်ရာရှိ တိုက်ခန်းသင့်တော်သောဈေးဖြင့်ရောင်းမည်။
သာကေတ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	690 သိန်း
Advertiser :ုဦးအောင်မြင့်ဦး
Phone : 095140630
ရောင်းရန် - သင့်တော်သောဈေးဖြင့် တိုက်သစ် ထာဝရ ဆောက်လုပ်ရေးမှ နှစ် ၆၀ ဂရံမြေပေါ်တွင် စည်ပင်မှသတ် မှတ်ထားသောစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ အရည်အသွေးမြင့်ဆောက် လုပ်ထားသော mini condo ရောင်းမည်။
ဧရိယာ : 1008 sqft
သင့်တော်သောဈေးဖြင့် တိုက်သစ် ထာဝရ ဆောက်လုပ်ရေးမှ နှစ် ၆၀ ဂရံမြေပေါ်တွင် စည်ပင်မှသတ် မှတ်ထားသောစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ အရည်အသွေးမြင့်ဆောက် လုပ်ထားသော mini condo ရောင်းမည်။
သင်္ဃန်းကျွန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	1,200 သိန်း
ရောင်းရန် - လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်၊အေးချမ်းစွာနေထိုင်ရန်နှင့်အကျိုးအမြတ်ရရှိစေရန်အတွက် ဈေးနှုန်းချိုတဲ့ မြေညီထပ်တိုက်ခန်းကျယ်လေးတစ်ခန်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ... ၇ ရပ်ကွက် ၊ အောင်သပြေ(၁၂)လမ်း ရှိမြေညီထပ်၊တိုက်သစ်၊လူနေထိုင်ခွင့်ကျ ပြီး အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီးရောင်းမည်
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်၊အေးချမ်းစွာနေထိုင်ရန်နှင့်အကျိုးအမြတ်ရရှိစေရန်အတွက် ဈေးနှုန်းချိုတဲ့ မြေညီထပ်တိုက်ခန်းကျယ်လေးတစ်ခန်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ... ၇ ရပ်ကွက် ၊ အောင်သပြေ(၁၂)လမ်း ရှိမြေညီထပ်၊တိုက်သစ်၊လူနေထိုင်ခွင့်ကျ ပြီး အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီးရောင်းမည်
သာကေတ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	640 သိန်း
Asking Price : 640 သိန်း
ရောင်းရန် - Star City Condo တွင် အိပ်ခန်းပါ ကွန်ဒိုရောင်းရန်ရှိသည်
Master Bedroom,Overhead Tank,Own Meter,Own motor,Power and lighting Line,ရေ+မီး...
Advertised by Kyu Kyu…
ဧရိယာ : 970 sqft
Star City Condo တွင် အိပ်ခန်းပါ ကွန်ဒိုရောင်းရန်ရှိသည်
သံလျင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	1,700 သိန်း
Advertiser : Kyu Kyu win
Phone : 095115087
ငှားရန် - မင်းဓမ္မအိမ်ယာ 09977901501
Advertised by Zaluck…
ဧရိယာ : 10000 sqft
မရမ်းကုန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	70 သိန်း
Phone : 09-977901501~12
ရောင်းရန် - ပိုင်​ရှင်​ကိုယ်​တိုင်​​ရောင်းမည့်​ ဗဟိုလမ်းဂုတ်​ကွက်​ မာလာမြိုင်​(၈)လမ်း လှိုင်​မြို့နယ်​ အုတ်​ကျင်း
Advertised by ​​ဒေါ်​ကေသွယ်​​အောင်​
ပိုင်​ရှင်​ကိုယ်​တိုင်​​ရောင်းမည့်​ ဗဟိုလမ်းဂုတ်​ကွက်​ မာလာမြိုင်​(၈)လမ်း လှိုင်​မြို့နယ်​ အုတ်​ကျင်း
လှိုင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	3,500 သိန်း
Advertiser : ​​ဒေါ်​ကေသွယ်​​အောင်​
Phone : 09450056542 ၊098741404, 095098028…
ရောင်းရန် - ၇၁ လမ်းနှင့် ၇၂ လမ်းကြား၊ ဗြူစောထီးလမ်းဘေးမေးတင်ထောင့်ကွက် လုံးချင်း၁ ထပ်အိမ်ပါသော မြေကွက် ရောင်းရန်ရှိသည်
Advertised by Hein…
၇၁ လမ်းနှင့် ၇၂ လမ်းကြား၊ ဗြူစောထီးလမ်းဘေးမေးတင်ထောင့်ကွက် လုံးချင်း၁ ထပ်အိမ်ပါသော မြေကွက် ရောင်းရန်ရှိသည်
ပြည်ကြီးတံခွန် | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး	2,100 သိန်း
ပြည်ကြီးတံခွန် | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
Phone : 09792826610,09450056542
ရောင်းရန် - လှိုင် သီရိမြိုင်လမ်း ရှိ ၃လွှာတိုက်ခန်းရောင်းမည်
Own Meter,Own motor,Power and lighting Line,Hall Type,ရေ+မီး...
လှိုင် သီရိမြိုင်လမ်း ရှိ ၃လွှာတိုက်ခန်းရောင်းမည်
လှိုင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	310 သိန်း
ရောင်းရန် - လှိုင်၊ အုတ်ကျင်းကွန်ဒိုမီနီယံ ရှိ ရောင်းရန်ရှိသော ကွန်ဒိုအခန်း (Malihku Real Estate)
Advertised by Ai Tha
လှိုင်၊ အုတ်ကျင်းကွန်ဒိုမီနီယံ ရှိ ရောင်းရန်ရှိသော ကွန်ဒိုအခန်း (Malihku Real Estate)
လှိုင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	1,600 သိန်း
Phone : 01 230 5703 , 01 527 699
ရောင်းရန် - ပုဏားကျွန်းစက်မှုဇုံ ဘောင်္ဆိပ်ချဉ်းကပ်လမ်း ၂ ရှိ မြေကွက် ရောင်းမည်
ပုဏားကျွန်း ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်
Advertised by မခင်သန်းနွယ်
ဧရိယာ : 141570 sqft
ပုဏားကျွန်းစက်မှုဇုံ ဘောင်္ဆိပ်ချဉ်းကပ်လမ်း ၂ ရှိ မြေကွက် ရောင်းမည်
ပုဏားကျွန်း | ရခိုင်ပြည်နယ်	20,000 သိန်း
Advertiser : မခင်သန်းနွယ်
ပုဏားကျွန်း | ရခိုင်ပြည်နယ်
Phone : 09-43194701/0986310711
ငှားရန် - အင်းစိန် ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ အိမ်ငှားရန်ရှိပါသည် လုံးချင်းအိမ်
အသင့်နေ,လျှာထိုးခင်း,Master Bedroom,Full Decoration,Carparking,Power…...
Advertised by Yar Pyae…
အင်းစိန် ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ အိမ်ငှားရန်ရှိပါသည် အင်းစိန် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	30 သိန်း
Advertiser : Yar Pyae Real Estate
အင်းစိန် ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ အိမ်ငှားရန်ရှိပါသည် အင်းစိန် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Phone : 01-2300789,09-253203204,09-253203205,
ငှားရန် - သန်လျင် မြို့နယ် ရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ထားသှောStar City CONDO အမြန်ငှားမည်
သန်လျင် မြို့နယ် ရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ထားသှောStar City CONDO အမြန်ငှားမည်
သံလျင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	650 USD
Asking Price : 650 USD
ရောင်းရန် - အောင်မင်္ဂလာလမ်း ကုန်းမြင့်ရိပ်သာပေါ်တွင် သုံးထပ်တိုက်သစ်ရောင်းမည်။
အသင့်နေ,ပါကေးခင်း,Master Bedroom,Full Decoration,Carparking,Power and…...
အောင်မင်္ဂလာလမ်း ကုန်းမြင့်ရိပ်သာပေါ်တွင် သုံးထပ်တိုက်သစ်ရောင်းမည်။
မရမ်းကုန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	13,500 သိန်း
Advertiser : Royal King Real Estate
Asking Price : 13,500 သိန်း
Phone : 09-974240506, 09-73235059,09-421064901
ရောင်းရန် - တံတားဖြူကံလမ်းပေါ်တွင် အသင်နေနိုင်သောပြင်ဆင်ပြီး လုံးချင်းတိုက်အိမ်ရောင်းမည်
အသင့်နေ,ပါကေးခင်း,Master Bedroom,Own Meter,Full Decoration,Carparking,Power…...
ဧရိယာ : 2080 sqft
တံတားဖြူကံလမ်းပေါ်တွင် အသင်နေနိုင်သောပြင်ဆင်ပြီး လုံးချင်းတိုက်အိမ်ရောင်းမည်
လှိုင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	25,000 သိန်း
Asking Price : 25,000 သိန်း
ရောင်းရန် - ရေကျာ် Condo အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီးေ၇ာင်းမည်
Advertised by ki ki
ရေကျာ် Condo အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီးေ၇ာင်းမည်
ပုဇွန်တောင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	1,900 သိန်း
Advertiser : ki ki
Asking Price : 1,900 သိန်း
Phone : 095197133, 095173086
123456> Last အကျိုးဆောင်များအတွက်
Shwe Property Mobile App apple store